Kuzokhunjulwa owayeyisilomo somsakazi ngedili lomculo kuSABC 1
U-EDDIE Zondi uzokhunjulwa ngedili lomculo ngoMgqibelo ebusuku Isithombe:ESIGCINIWE
OWAYEYISILOMO seMetro FM, uMakhosonke Eddie Zondi, uzokhunjulwa ngedili lomculo okuzobe kudlala kulo bukhoma ababengozakwabo kuMetro FM nakuSABC 1 ngoMgqibelo ebusuku.
UZondi owayesakaza uhlelo lwangeSonto ntambama iThe Romantic Repertoire, wadlula emhlabeni eneminyaka engu47 emuva kokumelwa yinhliziyo ngoJuni 16, 2014.
Uhlelo lokukhunjulwa kwale ngwazi, eyaduma ngekhono lokuqhulula izingoma zomculo opholile ongasoze wabuna, lizobe libophele ithimba labasakazi abayingxenye yeLove Movement, okubalwa kulo uWilson B Nkosi, Msizi Shembe, Sentle Lehoko noMo G.
Laba basakazi ababeyibambe noZondi kuleli qembu bazobe besina bededelana ihora lonke bakhumbula leli qhawe ngolozolo lomculo.
Abaphathi bohlelo kuzobe kungabasakazi balesi siteshi uThomas Msengana noLerato Kganyago. Ngaphandle kwabasakazi beMetro FM, kuzobuye kucule nezintandokazi zakuleli ayezifela ngazo uZondi, okubalwa kuzo iJaziel Brothers, Donald noMoneoa.
Le ndumezulu yomcimbi izobe isakazwa bukhoma kwiMetro FM ngoMgqibelo phakathi kuka10 ebusuku no2 ekuseni ngeSonto. Abanye bengalubukela lolu hlelo olukhethekile kuYouTube channel weMetro FM.
Ongumphathisiteshi osabambile kwiMetro FM, u-Anthony Soglo, uthe ngalo mcimbi uthe uyethemba ukuthi kuzothinteka abantu basemhlabeni wonke ababemkhonzile uZondi futhi bafuna ukukhombisa umndeni wakhe ukuthi bamkhumbule kanjani.
Oyisikhulu sikaSABC 1, uPhumzile Zonke, uthe uZondi uyohlale esezinhliziyweni nasezingqondweni futhi uyethemba ukuthi ababukeli bakaSABC 1 ngeke baphunduleke.
Nangonyaka owedlule iMetro FM yamkhumbula uZondi ngedili lomcimbi owawubophele nesihlabani saphesheya, uChris Walker.